MPT Myanmar | Moving Myanmar Forwardနိုဝင်ဘာ 2016 - MPT Myanmar | Moving Myanmar Forward
Month: နိုဝင်ဘာ 2016
SMS မှတစ်ဆင့် လှူဒါန်းငွေများကို နေပြည်တော်နှင့် ရခိုင်ပြည်နယ်တို့တွင် လှူဒါန်းငွေပေးအပ်ပွဲအခမ်းအနား အောင်မြင်စွာကျင်းပခဲ့
မြေငလျင်သင့်ဒေသများတွင် ပြန်လည်ပြုပြင်မွွမ်းမံမှုများ ပြုလုပ်ရန်အတွက် ကျပ်ငွေ ၁၅၂,၁၃၆,၅၀၀ ကို MPT သုံးစွဲသူ မိဘပြည်သူများ၏ SMS မှ တစ်ဆင့် သဒ္ဓါတရားထက်သန်စွာ လှူဒါန်းမှုကို လက်ခံရရှိခဲ့ပါသည်။
(ရန်ကုန်၊ နိုဝင်ဘာလ ၃၀ ရက်၊ ၂၀၁၆ ခုနှစ်) – မြန်မာနိုင်ငံ၏ ဦးဆောင်ဆက်သွယ်ရေးအော်ပရေတာဖြစ်သည့် မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်း (MPT) သည် မြေငလျင်သင့်ဒေသများတွင် ပြန်လည်ပြုပြင်မွွမ်းမံမှုများ ပြုလုပ်ရန်အတွက် ၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၉ ရက်မှ အောက်တိုဘာလ ၃၁ ရက် အထိ MPT ၏ မိုဘိုင်းဖုန်းသုံးစွဲသူများက SMS မှတစ်ဆင့် လှူဒါန်းမှုပေါင်း အကြိမ် ၃၀၀,၀၀၀ ကျော်မှ စုစုပေါင်း ၁၅၂,၁၃၆,၅၀၀ ကျပ်တိတိကို လက်ခံရရှိခဲ့ပြီး အဆိုပါ လှူဒါန်းငွေများကို နေပြည်တော်နှင့် ရခိုင်ပြည်နယ် မြောက်ဦးတို့တွင် ယနေ့ လှူဒါန်းငွေ လွှဲပြောင်းပေးအပ်ပွဲ အခမ်းအနားများ ပြုလုပ်ပြီး လွှဲပြောင်းပေးအပ်ခဲ့ပါသည်။
အဆိုပါ SMS မှတစ်ဆင့် ရရှိသောလှူဒါန်းငွေများအားလုံးကို ပြီးခဲ့သည့် သြဂုတ်လအတွင်းက ဖြစ်ပွားခဲ့သည့် ငလျင်ဒဏ်ကြောင့် ထိခိုက်ပျက်စီးမှုများဖြစ်ပေါ်ခဲ့သည့် ပုဂံဒေသနှင့် မြောက်ဦးဒေသရှိ စေတီပုထိုးများ ပြန်လည် ပြုပြင်မွမ်းမံမှုများတွင် အသုံးပြုနိုင်ရန်အတွက် လွှဲပြောင်းပေးအပ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါသည်။
ငလျင်ဒဏ်ကြောင့် ထိခိုက်ပျက်စီးသွားခဲ့သည့် ယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ် စေတီပုထိုးများကို ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေး လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်နေသည့် နေပြည်တော်ရှိ သာသနာရေးနှင့် ယဉ်ကျေးမှု ဝန်ကြီးဌာနမှ တာဝန်ရှိသူများထံသို့ MPT မိုဘိုင်းဆက်သွယ်ရေးဝန်ဆောင်မှုကို သုံးစွဲသူများ၏ SMS မှတစ်ဆင့် လှူဒါန်းငွေများကို MPT မှ ဦးဆောင်ညွှန်ကြားရေးမှူးဖြစ်သူ ဦးခင်မောင်ထွန်းက နိုဝင်ဘာလ (၃၀) ရက်နေ့က လွှဲပြောင်း ပေးအပ်ခဲ့ ပါသည်။
“MPT အသုံးပြုသူတွေရဲ့ သဒ္ဓါတရားထက်သန်မှုကြောင့် အလွန်အရေးပါတဲ့ ယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ်တွေကို ပြန်လည်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းဖို့ အမှန်တကယ်လိုအပ်တဲ့ အလှူဒါနပြုမှုမှာ အခုလို အထောက်အပံ့ ပေးနိုင်ခဲ့တာပါ” ဟု ဦးခင်မောင်ထွန်း က ပြောကြားသည်။
“MPT ရဲ့ မိုဘိုင်းဆက်သွယ်ရေးဝန်ဆောင်မှုကို အသုံးပြုသူတွေရဲ့ SMS ကတစ်ဆင့်ပြုလုပ်တဲ့ လှူဒါန်းမှုအစုစုကို အားလုံးကိုယ်စား ပေးအပ်ခွင့်ရတဲ့အတွက် အလွန်ကိုပဲ ဂုဏ်ယူမိပါတယ်။ ငလျင်ဒဏ်ကြောင့် ထိခိုက် ပျက်စီးသွားတဲ့ ပုဂံဒေသနဲ့ ရခိုင်ပြည်နယ်က စေတီပုထိုးတွေကို ပြုပြင်ဖို့အတွက် လှူဒါန်းငွေစုစုပေါင်း ကျပ် သိန်း ၁,၅၀၀ ကျော်ကို ရရှိခဲ့ပါတယ်။ ဒီလှူဒါန်းမှုကို နောင်လာနောက်သား မျိုးဆက်သစ်တွေအတွက် သမိုင်းဝင်ယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ်တွေ ထိန်းသိမ်းရာမှာ အသုံးပြုနိုင်ဖို့ မျှော်လင့်ပါတယ်” ဟု ၎င်းက ဆက်လက်ပြောကြားသည်။
ရခိုင်ပြည်နယ်၊ မြောက်ဦးမြို့တွင်လည်း MPT မှ မိုဘိုင်းဆက်သွယ်ရေးကို အသုံးပြုသူများ၏ SMS မှ လှူဒါန်းငွေများ လွှဲပြောင်းပေးအပ်ပွဲ အခမ်းအနားကို ယနေ့ကျင်းပခဲ့ပြီး ယင်းအခမ်းအနားသို့ ပြန်လည် ပြုပြင်တည်ဆောက်ရေး လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည့် ရတနာ့မာရ်အောင် ဆရာတော်နှင့် ကျောင်းတိုက်နေ သံဃာတော်များအပါအဝင် MPT မှ ဒေသခံ စီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့တို့က တက်ရောက်ခဲ့ ကြပါသည်။
ပြည်တွင်း ပြည်ပ သာသနာပြု မြောက်ဦးဆရာတော်၏ ဦးစီးမှုဖြင့် ပြန်လည် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေး လုပ်ငန်းများကို ဆောင်ရွက်နေသော မြောက်ဦးမြို့ရှိ ရတနာ့မာရ်အောင် ကျောင်းထိုင် ဆရာတော်ဖြစ်သည့် ဘဒ္ဒန္တဇာဂရ ကလည်း “ဒီလို လှူဒါန်းမှုတွွေပြုလုပ်ပေးကြတဲ့ MPT ရဲ့ သုံးစွဲသူတွေကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ဒီအလှူငွေတွေက စေတီပုထိုးတွေ ပြုပြင်ဆောင်ရွက်တဲ့ လုပ်ငန်းတွေမှာ အထောက်အကူ ပြုပါတယ်။ ပြည်သူတွေဆီကနေ လှူဒါန်းငွေတွေကို လက်ခံရရှိတဲ့အတွက်လည်း ဝမ်းသာမိပါတယ်။ SMS ကတစ်ဆင့် လှူဒါန်းနိုင်ရန် စီစဉ်ပေးခဲ့တဲ့ MPT နှင့် ပါဝင်လှူဒါန်းခဲ့ကြတဲ့ အလှူရှင်များအားလုံးကိုလည်း ကျေးဇူးတင်ပါတယ်” ဟု မိန့်ကြားခဲ့ပါသည်။
လှူဒါန်းမှုနှင့် ပတ်သက်သော အသေးစိတ်အချက်အလက်များနှင့် မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ၊ လှူဒါန်းငွေပေးအပ်ပွဲများ အကြောင်းကို MPT ၏ ဝက်ဘ်ဆိုက်နှင့် Facebook Page တို့တွင် ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။
မြန်မာပြည်၏ အကြီးမားဆုံး 3G ကွန်ရက်ကိုပိုင်ဆိုင်ထားပြီးဖုန်းအသုံးပြုသူပေါင်း သန်း၂၀ကျော်ရှိသည့် မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်း (MPT) သည် မြန်မာပြည်သူပြည်သားသုံးစွဲသူများနှင့် စီးပွားရေး လုပ်ငန်းကြီးများအတွက် လိုင်းဖုန်းများနှင့် မိုဘိုင်းဆက်သွယ်ရေးများကိုဝန်ဆောင်မှုပေးနေသော မြန်မာနိုင်ငံ၏ ပထမဆုံး နှင့် ထိပ်တန်းမှ ဦးဆောင်လျက်ရှိသော ဆက်သွယ်ရေး လုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ နှစ်ပေါင်း ၁၃၀ကျော်ကြာ မြန်မာနိုင်ငံ၏ ဆက်သွယ်ရေးကဏ္ဍဖွ့ံဖြိုးတိုးတက်ရန် ကြိုးပမ်းလုပ်ဆောင်နေသော ဆက်သွယ်ရေးအော်ပရေတာ တစ်ခုလည်း ဖြစ်ပါသည်။ ယနေ့တွင် မြန်မာတစ်နိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာဖြင့် ကွန်ရက်လွှမ်းခြုံနို်င်မှုမှာ ၉၆% ရှိနေပြီး အကျယ်ပြန့်ဆုံးသောကွန်ရက်ကိုပိုင်ဆိုင်သည့် လုပ်ငန်းတစ်ခု ဖြစ်ပါသည်။ ကျယ်ပြန့်သော အရောင်းစျေးကွက်များကို အသုံးပြု၍ မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းသည် တစ်နိုင်ငံလုံးအနှံ့ ဆက်သွယ်ရေးဝန်ဆောင်မှုများ ပိုမိုတိုးတက် များပြားလာစေရန် ရည်ရွယ် အကောင်အထည် ဖော်လျက်ရှိပါသည်။ KDDI-Sumitomo တို့နှင့်ပူးပေါင်း၍ ဝန်ထမ်းပေါင်း ၈ထောင်ကျော်နှင့်အတူ ဆက်သွယ်ရေးနည်းပညာကဏ္ဍကို တိုးတက်စေခြင်းဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံအားရှေ့သို့လှမ်းချီနိုင်စေရန် ကြိုးပမ်း ဆောင်ရွက်နေပါသည်။
MPT သည်ကမ္ဘာအကြီးဆုံးကြော်ငြာလုပ်ငန်းအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်သည့် WPP နှင့် စျေးကွက်ဆိုင်ရာ သုတေသန အဖွဲ့ဖြစ်သောMillward Brown တို့ဆောင်ရွက်သည့် BrandZ မှ “Sportlight on Myanmar” ခေါင်းစဉ်ဖြင့် ကောက်ယူထားသောစစ်တမ်းအရ၂၀၁၆ ခုနှစ် ဇွန်လ (၃၀) ရက်နေ့တွင် ထုတ်ပြန်ရာတွင် အဓိက ကျသည့် ကုန်အမှတ်တံဆိပ် ၄၂ ခု၌နိုင်ငံအတွင်း၌ လူကြိုက် အများဆုံးကုန်အမှတ်တံဆိပ် စာရင်း ၏ထိပ်ဆုံးတွင် ရပ်တည် နိုင်ခဲ့ပါသည်။
မြန်မာနိုင်ငံတွင် လက်ရှိဆက်သွယ်ရေးအော်ပရေတာဖြစ်သော မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်း (MPT) သည် KDDI ကော်ပိုရေးရှင်း (KDDI) ၊ Sumitomo ကော်ပိုရေးရှင်း (Sumitomo)တို့နှင့် လုပ်ငန်းစပ်တူပူးပေါင်းရန် ၂၀၁၄ခုနှစ် ဇူလိုင်လတွင် သဘောတူညီမှု လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကာ မြန်မာနိုင်ငံရှိမိုဘိုင်းဆက်သွယ်ရေး နည်းပညာပိုမို အဆင်ပြေလွယ်ကူစေရန်အတွက် ကွန်ရက်များကိုတိုးချဲ့ခြင်းနှင့် နည်းပညာသစ်များကိုအသုံးပြု၍ အရည်အသွေးမြင့် ဆက်သွယ်မှုကွန်ရက်အား ပြည်သူအများသုံးစွဲစေနိုင်ရန်အတွက် ကြိုးပမ်းအကောင်အထည် ဖော်လျက်ရှိပါသည်။
KDDI ကော်ပိုရေးရှင်းသည် ဂျပန်နိုင်ငံ၏ထိပ်တန်းဆက်သွယ်ရေးအော်ပရေတာလုပ်ငန်းကြီးတစ်ခုဖြစ်သည်။ KDDI သည် ခေတ်မီဆက်သွယ်ရေးစျေးကွက်များထဲတွင် အတွေ့အကြံုများစွာရရှိထားပြီးအကောင်းဆုံး ဖောက်သည်ဝန်ဆောင်မှုနှင့် အရည်အသွေးမြင့်နည်းစနစ်များကိုအသုံးပြုလျက် ဂျပန်နိုင်ငံစျေးကွက်တွင် ခိုင်မာအားကောင်းစွာရပ်တည်နေသည့် လုပ်ငန်းကြီးတစ်ခု ဖြစ်သည်။
Sumitomo ကော်ပိုရေးရှင်းသည် ကမ္ဘာတဝှမ်းရှိနယ်ပယ်ပေါင်းများစွာတွင် စီးပွားရေးလုပ်ဆောင်မှုများကို တာဝန်ယူ လုပ်ဆောင်နေသော အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ နိုင်ငံပေါင်း ၆၆ နိုင်ငံကျော်တွင် ရုံးခွဲများ ဖွင့်လှစ်ထားနိုင်ပြီး ကျယ်ပြန့်သောသုံးစွဲသူကွန်ရက်နှင့် ခိုင်မာသောရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများရှိသည်။ မြန်မာနိုင်ငံ အကြောင်းကို ကောင်းစွာ သိနားလည်ထားပြီး လွန်ခဲ့သည့် နှစ်ပေါင်း၅၀ကျော် ကြာကာလကတည်းက မြန်မာနိုင်ငံတွင် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်နေသာ Sumitomo သည် MPT နှင့် မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေးကဏ္ဍအတွက် အဓိကကျသောမိတ်ဖက် လုပ်ငန်းကြီးတစ်ခုဖြစ်သည်။
မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်း (MPT) နှင့်အတူ မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေးကဏ္ဍ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရန် KDDI နှင့် Sumitomo အတူပူးပေါင်း၍ အမေရိကန်ဒေါ်လာ၂ဘီလီယံကျော် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။ အဆိုပါရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုသည် မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းအကြီးမားဆုံးသောဂျပန်နိုင်ငံ၏ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတစ်ခုလည်း ဖြစ်ပါသည်။
အသေးစိတ်အချက်အလက်ကိုသိရှိလိုပါက https://www.mpt.com.mm သို့မဟုတ် http://www.facebook.com/mptofficialpage တွင် ဖတ်ရှုလေ့လာနိုင်ပါသည်။
မီဒီယာသတင်းအချက်အလက်များအတွက် မေးမြန်းလိုပါကဆက်သွယ်ရန် :
(+၉၅) ၀၉ ၄၂ ၃၀ ၀၀၁၇၁
(+၉၅) ၀၉ ၄၂၀၀ ၈၄၆၅၆
Author MPT TelecommunicationPosted on နိုဝင်ဘာ 30, 2016 နိုဝင်ဘာ 30, 2016 Categories CSR Activitiesmm, Latest Newsmm, Press Releasesmm
MPT မှ E Top-up ၃,၀၀၀ နှင့်အထက် ငွေဖြည့်ပြီး iPhone7Plus ကံထူးနိုင်မည့် အခွင့်အရေးကြီးတစ်ခု နှင့်စတင်မိတ်ဆက်
MPT မှ E Top-up ၃,၀၀၀ နှင့်အထက် ငွေဖြည့်ပြီး iPhone7Plus ကံထူးနိုင်မည့် အခွင့်အရေးကြီးတစ်ခု နှင့်စတင်မိတ်ဆက်ပေးလိုက်ပါပြီ။ ဘယ်လိုကံထူးနိုင်မလဲဆိုတော့ –
(၁) MPT ရဲ့ သတ်မှတ်ထားတဲ့ အမှတ်တံဆိပ်ဆိုင်ခွဲများနှင့် အရောင်းဆိုင်တွေမှာ E top-up ၃,၀၀၀ကျပ်ဖိုး (သို့) E top-up ၃, ၀၀၀ ကျပ်ဖိုး နှင့်အထက်ဖြည့်သွင်းပြီး ဆိုင်မှ MPT Facebook Photo Frame လေးနဲ့ အတူ ဓါတ်ပုံရိုက်ခွင့်ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။
(၂) ရိုက်ကူးထားတဲ့ ဓါတ်ပုံကို MPT Facebook Page သို့(နိုဝင်ဘာလ ၂၁ မှ ၂၇ ရက်အတွင်း) ပေးပို့ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။
(၃) နေ့စဉ်ပေးပို့ပေးတဲ့ပုံတွေကို MPT Facebook Page ပေါ်မှာတင်ပေးသွားမှာဖြစ်ပြီး နိုဝင်ဘာလ ၃၀ ရက်နေ့ မနက် (၁၁:ဝဝ) နာရီ အထိ ရရှိသည့် ( Heart Reaction + Comment + Share) စုစုပေါင်းအပေါ်မူတည်ပြီး အနိုင်ရရှိသူ ၅ ဦး ရွေးချယ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
(၄) အနိုင်ရရှိသူများကို iPhone7Plus ဆုချီးမြှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
ပြိုင်ပွဲဝင်စည်းကမ်းချက်များမှာ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်ပါသည်။
၁) MPT မှ ၀န်ထမ်းများ၊ မိသားစုဝင်များနှင့် ဆွေမျိုးများ၊ ပူးပေါင်းလုပ်ကိုင်နေသူများနှင့် လုပ်ငန်းခွဲများ ဒီပြိုင်ပွဲမှာ ပါ၀င်ခွင့် ရရှိမည် မဟုတ်ပါ။
၃) MPT Official Facebook Page ကို Like ပြုလုပ်ထားပြီး ဖော်ပြပါ ပြိုင်ပွဲ ကြေညာထားသည့် ပို့စ်ကို Like & Share ပြုလုပ်ထားသူ ဖြစ်ရမည်။
၄) သတ်မှတ်ထားသောMPT ဆိုင်များတွင် အနည်းဆုံး E Top-up ဖြင့် ၃,၀၀၀ ကျပ်ဖိုးငွေဖြည့်ပါက MPT Photo Frame ဖြင့် ဓါတ်ပုံရိုက်ကူးနိုင်မည်။
၅) ရိုက်ကူးထားသောဓါတ်ပုံသည် ကိုယ်တိုင်ပါ၀င်ရိုက်ကူးထားတဲ့ ဓာတ်ပုံဖြစ်ရန် လိုအပ်ပြီး မသင့်တော်သော ညစ်ညမ်းသော ဓာတ်ပုံများဖြစ်ပါက MPT၏ ဆုံးဖြတ်ချက်သာလျှင် အမှန်ဖြစ်ပါသည်။
၆) ရိုက်ကူးထားသောဓါတ်ပုံသည် MPT Photo Frame အပြည့် ပါဝင်ပြီး အရည်အသွေးကောင်းမွန် ကြည်လင်ပြတ်သားရမည်။
၇) နောက်ဆုံးအဆင့်အနေနှင့် ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ရန်အတွက် MPT Official Page ၏ Message Box သို့ အောက်ပါပုံစံအတိုင်းပေးပို့ပေးရမည်။
(ပေးပို့ရာတွင် Hashtag #SelfieWithMPT မပါဝင်ပါက လုံးဝထည့်သွင်းစဉ်းစားမည်မဟုတ်ပါ)
၈) ၂၀၁၆ ဒီဇင်ဘာလ ၁ ရက်နေ့တွင် အနိုင်ရရှိသူများကို ကြေငြာသွားမည်။
Author MPT TelecommunicationPosted on နိုဝင်ဘာ 19, 2016 နိုဝင်ဘာ 23, 2016 Categories Latest Newsmm
ဆင်းမ်ကတ်မှတ်ပုံတင်ခြင်းများ ပြုလုပ်နိုင်ရန် MPT နှင့် CB Bank တို့ လက်တွဲဆောင်ရွက်
(ရန်ကုန်၊ နိုဝင်ဘာလ ၁၆ ရက်၊ ၂၀၁၆) – မြန်မာနိုင်ငံ၏ ဦးဆောင်ဆက်သွယ်ရေး အော်ပရေတာဖြစ်သော မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်း (MPT) သည် CB Bank နှင့် ပူးပေါင်း၍ မြန်မာနိုင်ငံတဝှမ်းရှိ CB ဘဏ်ခွဲများတွင် ဆင်းကတ်မှတ်ပုံတင်ခြင်းလုပ်ငန်းများကို ၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ ၁၆ ရက်မှ စတင်၍ ဆောင်ရွက်နိုင်ပြီဖြစ် ကြောင်း သတင်းထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်သည်။
၂၀၁၆ ခုနှစ် သြဂုတ်လ (၁) ရက်နေ့တွင် ပို့ဆောင်ရေးနှင့် ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ဆက်သွယ်ရေး ညွန်ကြားမှု ဦးစီးဌာန၏ ညွှန်ကြားချက်အရ ဆင်းမ်ကတ်အားလုံးကို ၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ မတ်လနောက်ဆုံးထား၍ မှတ်ပုံတင်ရမည်ဖြစ်သည့်အတွက် MPT သည် ဆင်းမ်ကတ်မှတ်ပုံတင်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်များ ပိုမိုအဆင်ပြေ ချောမွေ့စွာလုပ်ဆောင်နိုင်စေရန် မိတ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းဖြစ်သည့် CB Bank နှင့် ချိတ်ဆက်ခဲ့ပါသည်။ CB Bank သည် ဆင်းမ်ကတ်မှတ်ပုံတင်ခြင်းကို လက်ခံဆောင်ရွက်ပေးသည့် ပထမဆုံးဘဏ်ဖြစ်ပြီး သုံးစွဲသူများသည် ၎င်းတို့၏ ဆင်းမ်ကတ်များကို ချောမွေ့လွယ်ကူစွာဖြင့် မှတ်ပုံတင်နိုင်တော့မည်ဖြစ်သည်။
MPT အသုံးပြုသူများသည် ယခုအချိ်န်တွင် CB ဘဏ်ခွဲပေါင်း ၂၄ ခုတွင် သွားရောက်မှတ်ပုံတင်နိုင်ပြီး CB Bank ၏ ကျန်ရှိသောဘဏ်ခွဲများတွင်ပါ ဝန်ဆောင်မှုများပေးသွားရန် စီစဉ်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည်။ ထို့ကြောင့် သတ်မှတ်ထားသော CB Bank ဘဏ်ခွဲများတွင် SIM Card Register ပြု လုပ်ပြီး Bank Account ပါ ဖွင့်ရင်း နှှင့် CB Bank မှပေးသော MPT ငွေဖြည့် ကဒ်လက်ဆောင်ကိုလည်းရယူနိုင်မည် ဖြစ်သည်။
တစ်နည်းအား ဖြင့်လည်း MPT Call Centre ၏ Customer Service ဖုန်းနံပါတ် 106 သို့ခေါ်ဆို၍လည်း အွန်လိုင်းမှတစ်ဆင့် SIM ကတ်မှတ်ပုံတင်နိုင်မည့် လုပ်ငန်းစဉ်များနှင့် လိုအပ်သည်များကို သိရှိနိုင်မည်ဖြစ် သည်။ ထို့အပြင် MPT အမှတ်တံဆိပ်ဆိုင်များတွင်လည်း သုံးစွဲသူများသည် ၎င်းတို့၏ ဆင်းမ်ကတ်များကို ရိုးရှင်းသည့်နည်းလမ်းဖြင့် မြန်ဆန်လွယ်ကူစွာ မှတ်ပုံတင်နိုင်ရန်အတွက် ဝန်ဆာင်မှုပေးလျက်ရှိပါသည်။
MPT-KSGM Joint Operation မှ Chief Commercial Officer ဖြစ်သူ Mr. Koichi Kawase က “ကျွန်တော်တို့ အနေနဲ့ CB Bank နဲ့လက်တွဲဆောင်ရွက်ရတာကို တကယ့်ကိုပဲ ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်မိပါတယ်။ ဒီလိုပဏာမခြေလှမ်းကနေ အစပြုပြီး လုပ်ငန်းစဉ်များဆက်လက်တိုးချဲ့သွားနိုင်ရန် ပူးပေါင်းလက်တွဲဖို့ မျှော်လင့်လျက်ရှိပါတယ်။ ဒါမှလည်း ကျွန်တော်တို့ရဲ့သုံးစွဲသူတွေဟာ သူတို့ရဲ့ ဆင်းမ်ကတ်တွေကို သတ်မှတ်ရက်မတိုင်ခင် မှတ်ပုံတင်ဖို့အလွယ်တကူဆောင်ရွက်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်” ဟု ပြောကြားသည်။
CB Bank မှ Deputy Head of Consumer Banking Division ဖြစ်သူ ဦးဇော်မင်းသန့်က “ဆင်းမ်ကတ် မှတ်ပုံတင်ခြင်းလုပ်ငန်းအတွက် MPT နဲ့ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရတာကို ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ ကျေနပ်မိပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ လက်ရှိသုံးစွဲသူတွေအတွက်လည်း ဆင်းမ်ကတ်မှတ်ပုံတင်တာတွေကို ကျွန်တော် တို့ရဲ့ ဘဏ်ခွဲတွေမှာ ပြုလုပ်နိုင်ပြီဆိုတော့ ပိုပြီးအဆင်ပြေပါတယ်။ဒီလိုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကနေ တစ်ဆင့် သုံးစွဲသူအသစ်တွေ၊ ငွေစာရင်းဖွင့်သူတွေကို ဆွဲဆောင်နိုင်လိမ့်မယ်လို့လည်း မျှော်လင့်ပါတယ်” ဟု ပြောကြား သည်။
ရန်ကုန်၊ မန္တလေးနှင့် နေပြည်တော်တို့အပါအဝင် မှတ်ပုံတင်ခြင်းဆောင်ရွက်နိုင်မည့် ဘဏ်ခွဲစာရင်း အပြည့် အစုံကို CB Bank lists တွင် ကြည့်ရှုနိုင်ပြီး ဖို်င်ကို ရယူနိုင်ပါသည်။
Author MPT TelecommunicationPosted on နိုဝင်ဘာ 16, 2016 Categories Latest Newsmm, Press Releasesmm
LTE+ FAQ MM
Author MPT TelecommunicationPosted on နိုဝင်ဘာ 15, 2016 ဩဂုတ် 31, 2020 Categories General mm
MPT ဖြင့် ၂ မိနစ် ဖုန်းခေါ်လျှင် ၂ မိနစ်စာအခမဲ့ ဆက်ပြောနိုင်မည့်အစီအစဉ်သစ် စတင်
(ရန်ကုန်၊ နိုဝင်ဘာလ ၁၅ ရက်၊ ၂၀၁၆ ခုနှစ်) – မြန်မာနိုင်ငံ၏ ဦးဆောင်ဆက်သွယ်ရေးအော်ပရေတာဖြစ်သော မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်း (MPT) သည် သုံးစွဲသူများ အဆက်မပြတ်ဖုန်းခေါ်ဆိုမှု အတွက် ပထမ ၂မိနစ်စာသာ ငွေပေးဆောင်ရန်လိုပြီး နောက်၂မိနစ်စာအခမဲ့ရမည့် ထူးခြားကောင်းမွန်သည့် “၂ မိနစ်ပြော ၂ မိနစလက်ဆောင်” ပရိုမိုရှင်း အစီအစဉ်တစ််ခုကို ယနေ့စတင်လိုက်ပြီဖြစ်သည်။
မြန်မာနိုင်ငံ၏ အကြီးမားဆုံးကွန်ရက်ပေါ်တွင် အချိန်ကြာကြာနှင့် များများပြောဆိုနိုင်တော့မည် ဖြစ်ပြီး MPT ဖုန်းအချင်းချင်း ခေါ်ဆိုမှုများအတွက် ပထမ ၂ မိနစ်မှာ ပုံမှန်အတိုင်းကျသင့်မည်ဖြစ်ကာ နောက်ထပ် ၂ မိနစ်စာအတွက် အခမဲ့ ပြောဆိုနိုင်မည်ဖြစ်သောကြောင့် စုစုပေါင်း ဖုန်းပြောဆိုခ၏ ၅၀ ရာခိုင်နှုန်းသာပေးရမည့် အစီအစဉ်တစ်ခုဟု ဆိုနိုင်ပါသည်။ အခမဲ့ ၂ မိနစ်ပြည့်သွားလျှင်မူ နောက်ထပ် ၂ မိနစ်အတွက် ပြောဆိုခကျသင့်မည်ဖြစ်ပြီး ဆက်လက်ပြောဆိုမည့် နောက် ၂ မိနစ်မှာ အခမဲ့ဖြစ်သည်။ သုံးစွဲသူများသည် အဆိုပါ ၂ မိနစ်ပြော၊ ၂ မိနစ် အခမဲ့ပုံစံဖြင့် မိနစ်(၆၀) တိုင်အောင် ဖုန်းပြောဆိုနိုင်မည် ဖြစ်သည်။
MPT ဆွေသဟာအသုံးပြုသူများအနေဖြင့် “၂ မိနစ်ပြော ၂ မိနစလက်ဆောင်”ဝန်ဆောင်မှုအစီအစဉ်ကို *2222# သို့ ဖုန်းခေါ်ဆို၍ သို့မဟုတ် 1332 သို့ TWO ဟု စာတိုပေးပို့၍ အခမဲ့ရယူနိုင်ပါသည်။ ဝန်ဆောင်မှုရယူခြင်းအတွက် အခကြေးငွေပေးရန်မလိုအပ်ဘဲ တစ်ကြိမ်ရယူထားလျှင် အဆိုပါ ပရိုမိုးရှင်းကာလ တစ်လျှောက်လုံး အကျုံးဝင်မည်ဖြစ်ပါသည်။
MPT-KSGM မှ Chief Commercial Officer ဖြစ်သူ Mr Koichi Kawase က “သုံးစွဲသူတွေအတွက် တစ်နေကုန် အကန့်အသတ်မရှိ ဖုန်းပြောဆိုနိုင်မယ့် စွဲမက်စရာကောင်းတဲ့ ဒီပရိုမိုးရှင်းကို မိတ်ဆက်လိုက်ပြီဖြစ်တာကြောင့် ကျွန်တော်တို့ရဲ့ သုံးစွဲသူတွေဟာ မြန်မာပြည်ရဲ့ အကြီးမားဆုံးကွန်ရက်ပေါ်ကနေ စကားပြောဆိုမှုတွေကို ပိုမိုပြုလုပ်နိုင်တော့မှာပါ။ MPT ဖုန်းအချင်းချင်း ၂ မိနစ်စာ ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုတိုင်းမှာ နောက်ထပ် ၂ မိနစ်စာ အခမဲ့ပြောဆိုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်” ဟု ပြောကြားသည်။
အဆိုုပါ ပရိုမိုးရှင်းရယူထားသူများအတွက် ဖုန်းပြောဆိုခမှာ တစ်မိနစ်လျှင် ၂၃ ကျပ်ကျသင့်သည့် ဆွေသဟာနှုန်းထား အတိုင်းပင်ဖြစ်ပြီး အခမဲ့ပြောဆိုနိုင်သည့် မိနစ်များအတွက် လုံးဝ ငွေကြေးကုန်ကျမည် မဟုတ်ပေ။ “၂ မိနစ်ပြော ၂ မိနစ်လက်ဆောင်” ပရိုမိုးရှင်းအစီအစဉ်ဖြင့် မိနစ် (၆၀) ဆက်တိုက် ဖုန်းပြောဆိုပြီးနောက်ပိုင်း ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုများကို ပုံမှန်ဆွေသဟာနှုန်းထားအတိုင်းဆက်လက် ကောက်ခံသွား မည်ဖြစ်ပါသည်။
သုံးစွဲသူများ နားလည်လွယ်ရန်အတွက် အောက်ပါဇယားကွက်ကို ထည့်သွင်းပေးထားပါသည်။
အဆိုပါ ပရိုမိုးရှင်းအစီအစဉ်ကို နိုဝင်ဘာလ ၁၅ ရက်နေ့မှ ဒီဇင်ဘာလ ၁၅ ရက်နေ့ထိ ရရှိနိုင်မည်ဖြစ်ပြီး အသေး စိတ်သိလိုသည်များအတွက် mpt.com.mm သို့မဟုတ် MPT Facebook Page တွင် ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါ သည်။
မှတ်ချက်။ အထက်ဖော်ပြပါ စျေးနှုန်းများတွင် ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန် ၅ % ထပ်ဆောင်းကောက်ခံသွားမည် ဖြစ်ပါသည်။
Author MPT TelecommunicationPosted on နိုဝင်ဘာ 15, 2016 နိုဝင်ဘာ 28, 2016 Categories Press Releasesmm
Author MPT TelecommunicationPosted on နိုဝင်ဘာ 11, 2016 Categories Latest Newsmm
SIM Registration Faqa MM
GENERAL » ဆင်းမ်ကတ်မှတ်ပုံတင်ခြင်း
ဆင်းမ် ကတ်မှတ်ပုံတင်ခြင်းမှာ ဆက်သွယ်ရေးညွန်ကြားမှုဦးစီးဌာန ညွှန်ကြားချက်ကို MTP မှ လိုက်နာဆောင်ရွက်ခြင်းဖြစ်ပြီး အသုံးပြုသူများအနေဖြင့် ၂၀၁၇ ခုနှစ် မတ်လ ၃၁ ရက်နေ့ နောက်ဆုံးထားပြီး မှတ်ပုံတင်ရန် လိုအပ်ပါသည်။
MPT/Ooredoo/Telenor/MEC တို့အတွက် ဆင်းမ်ကတ်မှတ်ပုံတင်ခြင်း လိုအပ်ပါသလား။
ဆင်းမ်ကတ်မှတ်ပုံတင်ခြင်းသည် ဆင်းမ်ကတ်ရောင်းချသော မည်သည့်အော်ပရေတာ နှင့်မဆို သက်ဆိုင်မှုရှိပါသည်။
ဖုန်းနံပါတ်တွေကို ဘာကြောင့် မှတ်ပုံတင်ဖို့လိုအပ်တာပါလဲ။
သြဂုတ်လ ၁ ရက်နေ့က ပို့ဆောင်ရေးနှင့် ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၏ လက်အောက်ရှိ ဆက်သွယ်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနသည် ဆင်းမ်ကတ်များအားလုံးကို ၂၀၁၇ ခုနှစ် ၊ မတ်လ ၃၁ ရက်နေ့ မတိုင်မီ မှတ်ပုံတင်ကြပါရန် ကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါသည်။ အွန်လိုင်းမှစျေးဝယ်ခြင်း ကိစ္စရပ်များအတွက် မိုဘိုင်းမှတစ်ဆင့် ငွေပေးချေခြင်း၊ ဘဏ်ဝန်ဆောင်မှုရယူခြင်းတို့ ဆောင်ရွက်ရာ၌ မှတ်ပုံတင်ပြီး ဆင်းမ်ကတ်များကို အထောက်အထားကောင်း တစ်ခုအဖြစ် အသုံးပြုနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ထို့အပြင် ဆင်းမ်ကတ်ပျောက်ဆုံးခြင်း၊ ပျက်စီးခြင်းတို့အတွက်လည်း အဆိုပါ မှတ်ပုံတင်ထားသောဆင်းမ်ကတ်ဖြင့် ပိုင်ရှင်ဖြစ်ကြောင်း သက်သေခံနိုင်မည်ဖြစ်ပါတယ်။
ဆင်းမ်ကတ်မှတ်ပုံတင်ရာတွင် မည်သည့်အထောက်အထား၊ အချက်အလက်များ လိုအပ်ပါသလဲ။
ဆင်းမ်ကတ်မှတ်ပုံတင်ရာတွင် အနည်းဆုံး နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ် သို့မဟုတ် အခြားသောစိစစ်ရေး ကတ်၏ မိတ္တူ (အကယ်၍ နိုင်ငံခြားသားဖြစ်ပါက နိုင်ငံကူးလက်မှတ်) တို့ကို ယူဆောင်လာရန် လိုအပ်ပါသည်။
ဆင်းမ်ကတ်မှတ်ပုံတင်သူတို့ရဲ့ သတင်းအချက်အလက်များဟာ လုံခြုံမှုရှိပါသလား။
ဟုတ်ကဲ့။ ဆင်းမ်ကတ်မှတ်ပုံတင်စေလိုသည့် ရည်ရွယ်ချက်မှတစ်ပါး အခြားရည်ရွယ်ချက် မရှိသဖြင့် အော်ပရေတာများမှ ရရှိသောသတင်းအချက်အလက်များအားလုံးမှာ လုံခြံုမှု အပြည့် ရှိပါသည်။
မှတ်ပုံတင်သူ၏ သတင်းအချက်အလက်များကို မူလရည်ရွယ်ချက်ထက်ကျော်လွန်၍ အခြားသောရည်ရွယ်ချက်များအတွက် အသုံးပြုနိုင်ပါသလား။
ဆင်းမ်ကတ်ဝယ်ယူသူ၏ သတင်းအချက်အလက်များကို မူလရည်ရွယ်ချက်မှတစ်ပါး အခြားကိစ္စရပ်များအတွက် အသုံးပြုသွားမည်မဟုတ်ပါ။
ဆင်းမ်ကတ်မှတ်ပုံတင်ရာမှ ရရှိသောသတင်းအချက်အလက်များဟာ ဖုန်းအသုံးပြုမှု အပေါ် သက်ရောက်မှုရှိနိုင်ပါသလား။
ဆင်းမ်ကတ်မှတ်ပုံတင်ခြင်းမှ ရရှိသောသတင်းအချက်အလက်များကြောင့် ဖုန်းအသုံးပြုမှု အပေါ် သက်ရောက်မှုလုံးဝမရှိပါ။
စာချုပ်ဖြင့်ဝယ်ယူထားသော MPT ဆင်းမ်ကတ်များကိုလည်း မှတ်ပုံတင်ရန်လိုအပ် ပါသလား။
စာချုပ်ဖြင့်ဝယ်ယူထားသော MPT ဆင်းမ်ကတ်များကတော့ မှတ်ပုံတင်ရန်မလိုအပ်ပါဘူး။ သို့ပေမယ့် လက်ရှိအသုံးပြုနေသော ဆင်းမ်ကတ်ပိုင်ရှင်နဲ့ စာချုပ်ပါ နာမည်တို့ တူညီမှုမရှိပါက မှတ်ပုံတင်ခြင်းကို ပြန်လည်လုပ်ဆောင်ရပါလိမ့်မယ်။
တစ်ယောက်ထဲမှ ဆင်းမ်ကတ်အမြောက်အများကို မှတ်ပုံတင်လို့ရပါသလား။
ဟုတ်ကဲ့၊ လူတစ်ယောက်ထဲမှ ဆင်းမ်ကတ်များကို မှတ်ပုံတင် နိုင်ပါသည်။
MPT အရောင်းဆိုင်စာရင်းကို ရယူပါ။
လက်ရှိ အသုံးပြုနေသူ သည့် သုံးစွဲသူမိဘပြည်သူများအတွက် အောက်တိုဘာလ ၁၈ ရက်နေ့မှ စတင်ကာ အွန်လိုင်းမှတစ်ဆင့် ဆင်းမ်ကတ်မှတ်ပုံတင်ခြင်းကို MPT က မိတ်ဆက်လိုက်ပြီ ဖြစ်သည်။
၀က်ဘ်ဆိုဒ်တွင် မှတ်ပုံတင်သူများပြားလွန်း၍ မှတ်ပုံတင်ရာတွင် အခက်အခဲများရှိတတ်သည့် အတွက် MPT သည် သုံးစွဲသူတစ်ဦးချင်းစီသို့ စာတိုပေးပို့ကာ အကြောင်းကြား သွားမည်ဖြစ်သည်။ အသုံးပြုသူများအနေဖြင့် အဆိုပါ အချက်အလက်များကို ရရှိပါက ယင်း Link မှတစ်ဆင့်ညွှန်ကြားချက်များကို လိုက်နာလုပ်ဆောင်သွားရမည်ဖြစ်ပါသည်။ သို့ဖြစ်ပါ၍ MPT မှ ဆင်းမ်ကတ် မှတ်ပုံတင်ရန် အကြောင်းကြားသည့်စာတို မိမိထံရောက် ရှိချိန်ထိ ကျေးဇူးပြု၍ စောင့်ဆိုင်းပေးပါ။
ဆင်းမ်ကတ်မှတ်ပုံတင်ရာတွင် အဖိုးအခကုန်ကျမှု လုံးဝမရှိပါ။
ဆင်းမ်ကတ်များကို ဘယ်လောက်စောစော မှတ်ပုံတင်ထားရပါမလဲ။
ဆင်းမ်ကတ်များကို ၀ယ်ယူပြီးပြီးချင်း အဆိုပါအရောင်းဆိုင်တွင် မှတ်ပုံတင်ရပါမည်။
ဆင်းမ်ကတ်ဝယ်ယူချိန်က မှတ်ပုံမတင်ရသေးလျှင် အခုမှတ်ပုံတင်ဖို့ လိုအပ်ပါ သလား။
ဟုတ်ကဲ့။ ၀ယ်ယူသည့်အချိန်တွင် မှတ်ပုံတင်ထားခြင်းမရှိသော ဆင်းမ်ကတ်များကို မှတ်ပုံတင်ဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။
ဆင်းမ်ကတ်ကို မှတ်ပုံမတင်ဘဲသုံးမည်ဆိုလျှင် ဘာဖြစ်နိုင်မလဲ။
ဆင်းမ်ကတ်မှတ်ပုံတင်ခြင်းသည် မဖြစ်မနေဆောင်ရွက်ရမည့်ကိစ္စတစ်ရပ် ဖြစ်ပါသည်။ ဆင်းမ်ကတ်ဝယ်ယူထားသူတိုင်း မှတ်ပုံတင်ခြင်း ပြုလုပ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ အကယ်၍ သတ်မှတ် ထားသော ၂၀၁၇ ခုနှစ်မတ်လ ၃၁ ရက်အထိ မှတ်ပုံတင်နိုင်ခြင်းမရှိသော ဆင်းမ်ကတ်များကို ဆက်သွယ်ရေး ညွန်ကြားမှုဦးစီးဌာနက ကြေညာထားသည့်အတိုင်း ယာယီဖြတ်တောက်သွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ MPT မှလည်းသုံးစွဲသူများမိဘပြည်သူများ မှတ်ပုံတင်နိုင်ရန်အတွက်လည်း တိုက်တွန်းနိုးဆော် အပ်ပါတယ်။
ဆင်းမ်ကတ်ဝယ်ယူချိန်တွင် မှတ်ပုံတင်ခြင်းပါ တစ်ပါတည်းပြုလုပ်ရမည်ဖြစ်၍ မိမိဆင်းမ် ကတ်မှတ်ပုံတင်ထားခြင်းရှိမရှိ သိနိုင်ပါသည်။ MPT အနေဖြင့် ၀က်ဘ်ဆိုဒ်မှတစ်ဆင့် မှတ်ပုံတင်ခြင်းကို အောက်တိုဘာလ ၁၈ ရက်နေတွင် သုံးစွဲသူများကို မိတ်ဆက်ပေးသွား ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ သုံးစွဲသူများအနေဖြင့် Customer Self Care ဝက်ဆိုဒ်တွင် ဖော်ပြထားသော မှတ်ပုံတင်ခြင်း ဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းစဉ်များကို လိုက်ပါဆောင်ရွက်နိုင်မှာဖြစ်ပါသည်။ အကယ်၍ သုံး စွဲသူများအနေဖြင့် မှတ်ပုံတင်ထားခြင်းကို အဆိုပါ ဝက်ဆိုဒ် တွင် ရှာဖွေမတွေ့ရှိပါက မှတ်ပုံတင် ခြင်းကိုပြန်လည်ပြုလုပ်ရပါမည်။ ထိုအပြင် ရှာဖွေတွေရှိသော မှတ်ပုံတင်အချက်အလက်များ ကိုက်ညီ ခြင်းမရှိပါကလည်း သုံးစွဲသူများအနေဖြင့် လွယ်ကူစွာ အသစ်ပြန်လည် မှတ်ပုံတင်နိုင် မည်ဖြစ်ပါတယ်။ သုံးစွဲသူမိဘပြည်သူများ မှတ်ပုံတင်ထားခြင်းရှိမရှိကို လွယ်ကူသက်သာစွာ စစ်ဆေးနိုင်ရန်အတွက် USSD စနစ်ဖြင့် စစ်ဆေးသည့်နည်းများကိုလည်း ဆောင်ရွက်သွားရန်ရှိ ပါသည်။
ဆင်းမ်ကတ်မှတ်ပုံတင်ခြင်းကို ကိုယ်စားပြုလုပ်ပေး၍ ရပါသလား။
ဟုတ်ကဲ့။ နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြား သို့မဟုတ် ခိုင်လုံသောစိစစ်ရေးကတ်တစ်ခုခု၏ မိတ္တူပါဝင်ပါက ဆင်းမ်ကတ်မှတ်ပုံတင်ရာတွင် ကိုယ်စားလှယ်လွှဲ၍ ဆောင်ရွက်နိုင်ပါသည်။
မှတ်ပုံတင်ဖို့ အဆင်မပြေတဲ့သူတွေ၊ ဝေးလံခေါင်ဖျားဒေသကလူတွေ၊ ကိုယ်လက်အင်္ဂါ မသန်စွမ်းသူတွေ၊ သက်ကြီးရွယ်အိုတွေနဲ့ ကလေးလူငယ်တွေ အနေနဲ့ မှတ်ပုံတင်ဖို့ ဘယ်လိုပြုလုပ်နိုင်ပါသလဲ။
မှတ်ပုံတင်ဖို့ အဆင်မပြေတဲ့သူတွေ၊ ဝေးလံခေါင်ဖျားဒေသကလူတွေ၊ ကိုယ်လက်အင်္ဂါ မသန်စွမ်းသူတွေ၊ သက်ကြီးရွယ်အိုတွေနဲ့ ကလေးလူငယ်တွေ အနေနဲ့ သူတို့ရဲ့ မှတ်ပုံတင် သို့မဟုတ် သက်သေခံကတ်ပြားတစ်ခုခုကို ကိုယ်စားပြုလုပ်ပေးမယ့် လူတစ်ယောက်ကို ပေးပြီး၊ ဆင်းမ်ကတ်ဝယ်ယူခြင်းနဲ့ မှတ်ပုံတင်ခြင်းတို့ကို ကိုယ်စားပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။
ကော်ပိုရေးရှင်းတို့လို လုပ်ငန်းအဖွဲ့အစည်းအတွင်းမှာ အသုံးပြုဖို့ သီးသန့် ဝယ်ယူထားတဲ့ ဆင်းမ်ကတ်တွေ ကို မှတ်ပုံတင်ခွင့်ပြုမှာလား
လုပ်ငန်းအဖွဲ့အစည်းအတွင်းမှာ အသုံးပြုဖို့ သီးသန့်ဝယ်ယူထားတဲ့ ဆင်းမ်ကတ်တွေကို မှတ်ပုံတင်ခွင့်ပြုပါတယ်။
မှတ်ပုံတင်ဖို့အတွက် ပေးထားတဲ့ အချက်အလက်တွေကို ပြောင်းဖို့အကြောင်း ပေါ်လာရင် ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ။
အချက်အလက်ပြောင်းလဲတာတွေကို သုံးစွဲသူ ဝယ်ယူခဲ့တဲ့ အရောင်းဆိုင်မှာပဲ ပြန်လည်ပြင်ဆင်ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။ အခုအသစ်မိတ်ဆက််လိုက်တဲ့ Customer Self Care ဝက်ဘ်ဆိုက် စာမျက်နှာကလည်းနောက်ပိုင်းမှာ မှတ်ပုံတင်တာကို လုပ်ဆောင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
အကယ်၍ ကိုယ့်ရဲ့ ဆင်းမ်ကတ်ကို မှတ်ပုံမတင်ဘူးဆိုရင် သုံးစွဲသူရဲ့ ဖုန်းထဲက အဝင် အထွက် ဖုန်း call တွေနဲ့ လက်ရှိ ရယူထားတဲ့ ဝန်ဆောင်မှုတွေက ဘာဖြစ်သွားမလဲ။
ဆင်းမ်ကတ်မှတ်ပုံတင်ခြင်းဟာ မဖြစ်မနေဆောင်ရွက်ရမည့်ကိစ္စတစ်ရပ် ဖြစ်ပါသည်။ ဆင်းမ်ကတ်ဝယ်ယူထားသူတိုင်း မှတ်ပုံတင်ခြင်း ပြုလုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ အကယ်၍ သတ်မှတ် ထားသော ၂၀၁၇ ခုနှစ်မတ်လ ၃၁ ရက် အမှီ မှတ်ပုံတင်နိုင်ခြင်းမရှိတဲ့ ဆင်းမ် ကတ်တွေကို ဆက်သွယ်ရေး ညွန်ကြားမှုဦးစီးဌာနက ကြေညာထားသည့်အတိုင်း ယာယီဖြတ်တောက်သွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ MPT မှလည်းသုံးစွဲသူ မိဘပြည်သူတွေ မှတ်ပုံတင်နိုင်ရန်အတွက်လည်း နှိုးဆော် ထားပါတယ်။
Inventory SIM တွေကိုရော မှတ်ပုံတင်ရမှာလား။
ရောင်းချပြီးတဲ့ ဆင်းမ်ကတ်တွေ အကုန်လုံး မှတ်ပုံတင်ဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။
သုံးစွဲသူတွေက အော်ပရေတာဆီကို ၀ယ်ယူဖို့လျှောက်လွှာ ဘယ်လိုပေးပို့ ရမှာပါသလဲ။
အော်ပရေတာရဲ့ သက်ဆိုင်ရာအရောင်းဝန်ထမ်းတိုင်းကို ဆက်သွယ်ပေးပို့နိုင်ပါတယ်။
သက်ဆိုင်ရာအရောင်းဆိုင်က သုံးစွဲသူရဲ့ အချက်အလက်တွေကို မရယူထားဘူးဆိုရင် အဆိုပါ ဖြန့်ချိရောင်းချသူကို အရေးယူမှာမျိုးရှိလား။
မရှိပါဘူး။ သို့ပေမယ့် ဆင်းမ်ကတ်ဝယ်ယူသုံးစွဲသူတိုင်း မှတ်ပုံတင်းခြင်းကို မဖြစ်မနေပြု လုပ်ရပါမည်။
အွန်လိုင်းကနေ ဆင်းမ်ကတ် မှတ်ပုံတင်ခြင်းပြုလုပ်ဖို့အတွက် မိုဘိုင်းဒေတာ အသုံးပြုဖို့ လိုအပ်ပါသလား။ အခမဲ့ မှတ်ပုံတင်လို့ရလား။
အွန်လိုင်းမှတစ်ဆင့် ဆင်းမ်ကတ် မှတ်ပုံတင်ခြင်းက အခမဲ့ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။
Customer self-care ဆိုတာ ဘာပါလဲ။
Customer self-care ဆိုတာက သုံးစွဲသူတွေ အွန်လိုင်းကတစ်ဆင့် ဆင်းမ်ကတ် မှတ်ပုံတင်ခြင်း ပြုလုပ်နိုင်တဲ့ အွန်လိုင်းအခြေပြု ဝန်ဆောင်မှုတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
အွန်လိုင်းကတစ်ဆင့် ဆင်းမ်ကတ်မှတ်ပုံတင်ခြင်းပြုလုပ်နိုင်ဖို့အတွက် လိုအပ်တဲ့ အဆင့်တွေကို ဘယ်လို သိနိုင်မလဲ။ MPT အမှတ်တံဆိပ် စတိုးဆိုင်တွေက ဝန်ထမ်းတွေကို ကျွန်တော့်အတွက် မှတ်ပုံတင်ပေးဖို့ ပြောရင် ရမလား။
သုံးစွဲသူများအနေနဲ့ MPT ထံမှ Customer Self-Care စာမျက်နှာ (https://care.mpt.com.mm/sign-in) သို့ဝင်ရောက်နိုင်တဲ့ လင့်ခ်တစ်ခုပါ၀င်တဲ့ စာတို လက်ခံရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ မိိမိရဲ့ ဖုန်း သို့မဟုတ် ကွန်ပျူတာကနေပြီးတော့ အဲ့ဒီ Link ကို ဝင်ပြီး ပထမဦးစွာ Sign up လုပ်ရမှာဖြစ်ပြီး၊ ထိုမှတဆင့် Log in တွင် သုံးစွဲသူတွေရဲ့ ဖုန်းနံပါတ်ကို ရိုက်ထည့်ရပါမည်။ 106 ကို ခေါ်ဆိုပြီး MPT ရဲ့ သုံးစွဲသူဝန်ဆောင်မှု ပေးတဲ့ Call Center ကိုလည်း ဆက်သွယ်မေးမြန်း နိုင်ပါတယ်။ အွန်လိုင်းကနေ မှတ်ပုံတင်ခြင်း ပြုလုပ်ပုံအဆင့်ဆင့်နဲ့ လိုအပ်ချက်များကို အဲဒီကတစ်ဆင့် ရှင်းလင်း ပြောပြပေးမှာ ဖြစ်ပါသည်။
သုံးစွဲသူများဟာ ၀က်ဘ်ဆိုဒ်မှတစ်ဆင့် ဆင်းမ်ကတ်မှတ်ပုံတင်ခြင်းကို ဘယ်လိုပြုလုပ် နိုင်ပါသလဲ။
အွန်လိုင်းတွင် ဆင်းမ်ကတ်မှတ်ပုံတင်ခြင်းပြုလုပ်ရန်အတွက် အောက်ပါ အချက် များ အတိုင်းပြုလုပ်နိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။
အဆင့် (၁) = မှတ်ပုံတင်ခြင်းအတွက် အဖွင့်လုပ်ဆောင်ချက် (Sign up)
၁။ MPT မှ သုံးစွဲသူတစ်ဦးချင်းထံ စာတိုပေးပို့၍ အကြောင်းကြားပါမည်။
၂။ သုံးစွဲသူသည် စာတိုကိုဖွင့်ကြည့်လျှင် MPT Customer Self care ၏ Sign up စာမျက်နှာအတွက် URL လင့်ခ်ကိုတွေ့မြင်ရမည်ဖြစ်မှာဖြစ်ပါတယ်။
၃။ ၄င်း လင့်ခ်ကို နှိပ်လိုက်ပြီး၊ မိမိ၏မိုဘိုင်းဖုန်းနံပါတ်ကို ဖြည့်သွင်းရမည်။
၄။ ထို့နောက် လျှို့ဝှက်နံပါတ်ကို အနည်းဆုံး ၆လုံး(ကိန်းဂဏန်းနှင့် စာ) ဖြည့်သွင်းရမည်ဖြစ်သည်။
၅။ လျှို့ဝှက်နံပါတ်ကို အတည်ပြုရမည်။ (မူလပေးထားသော လျှို့ဝှက်နံပါတ်ကို ပြန်လည် ဖြည့်သွင်းရမည်)
၆။ သုံးစွဲသူသည် “ Get” ခလုတ်ကို နှိပ်၍ မိမိပေးထားသောဖုန်းနံပါတ်မှတစ်ဆင့် အတည်ပြုချက်ပေး သည့် ကုတ်အမှတ်ကို စာတိုဖြင့် လက်ခံရရှှိမည်ဖြစ်သည်။
၇။ အတည်ပြုချက်ပေးသည့် ကုတ်အမှတ်ကို ထည့်ပြီးပါက သုံးစွဲသူသည် ၀က်ဘ်ဆိုဒ်မှမှတ်ပုံ တင်နိုင်သောစာမျက်နှာသို့ ၀င်ရောက်နိုင််မည် ဖြစ်သည်။
အကောင့် Sign up အောင်မြင်စွာ ပြုလုပ်ပြီးပါက သတိပေးမှုပြုသည့် message တစ်ခု ပေါ်လာမည်ဖြစ်ပြီး သုံးစွဲသူသည် Log In ကို ၀င်ရောက်ပြီး ဆင်းမ်ကတ် မှတ်ပုံတင်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။
အဆင့် (၂)= မှတ်ပုံတင်ခြင်းအတွက် စနစ်သို့ဝင်ရောက်ခြင်း (Log In)
သုံးစွဲသူသည် MPT ၀က်ဘ်ဆိုဒ်မှတစ်ဆင့် “Customer Self Care” ဟု အမည်ရ ဆင်းမ်ကတ် မှတ်ပုံတင်ခြင်းစာမျက်နှာသို့ ၀င်ရောက်ရမည်ဖြစ်သည်။ ထို့နောက်
၁။ မိမိတို့၏ ဖုန်းနံပါတ်ကိုဖြည့်သွင်းပါ။ (၉xxxxxxxx)
၂။ အဖွင့်လုပ်ဆောင်ချက်တွင် ဖြည့်သွင်းထားသည့် လျှို့ဝှက်နံပါတ်ကို ထပ်မံဖြည့်သွင်းပြီး သတ်မှတ်ထားသည့်အဆင့်များအတိုင်းလုပ်ဆောင်ပါ။
၃။ ထို့နောက် sign in ခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ။
အကယ်၍ သုံးစွဲသူက Log In အဆင့်တွင် မိမိ၏ လျှို့ဝှက်ကုဒ်ကို မေ့နေပါက ၎င်းအနေဖြင့် အောက်ဖော်ပြပါ လင့်ခ် အတိုင်းဝင်ရောက်ကာ စာတိုပေးပို့မှုမှရရှိသည့် အတည်ပြုချက်ပေးသည့် ကုဒ်အမှတ်ကို ဖြည့်သွင်းကာဝင်ရောက်ပြီး ညွှန်ကြားချက်များအတိုင်း ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ပါ။
အဆင့် ၃= ဆင်းမ်ကတ်မှတ်ပုံတင်ခြင်း (SIM Registration)
ယင်းနောက်တွင် သုံးစွဲသူအနေဖြင့် မိမိတို့၏ နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြား သို့မဟုတ် အခြားသော သုံးစွဲသူ၏ ခိုင်လုံသောစိစစ်ရေးကတ်၏ ဓါတ်ပုံကို attached file တွင် တင်ရမည်ဖြစ်ပြီး၊ Menu->My Information-> Customer Profile တွင်ဝင်၍ “Submit” လုပ်ပြီး အွန်လိုင်း ဆင်းမ်ကတ် မှတ်ပုံတင်ခြင်းကို ဆောင်ရွက်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။
Author MPT TelecommunicationPosted on နိုဝင်ဘာ 10, 2016 ဩဂုတ် 17, 2017 Categories Personal Pagemm
Data ဝန်ဆောင်မှု ပရိုမိုရှင်းများ » Night Time Data Package>>>“ဤဝန်ဆောင်မှုအား ရယူအသုံးပြုခြင်းဖြင့် လူကြီးမင်းသည် အောက်ဖော်ပြပါ link တွင် ဖော်ပြပါရှိသော နောက်ဆုံးပြင်ဆင်ထားသည့် MPT ၏ အထွေထွေစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများကိုသဘောတူညီပြီးဖြစ်သည်။”
Night Time Data Package ဆိုတာဘာလဲ?
MPT ၏ ၀ယ်ယူအသုံးပြုသူများအတွက် ညဘက်များတွင် စတင်ဝယ်ယူသည့်အချိန်မှ စတင်၍ ၈ နာရီ အသုံးပြုနိုင်သည့် ၀န်ဆောင်မှုဖြစ်သည်။
USSD Code ဖြင့်ရယူရန်
“Night Time Data Package”၀ယ်ယူထားသူသည် ည(၁၁)နာရီမှ မနက်(၇)နာရီအတွင်း အင်တာနက်အသုံးပြုပါက Night Time Data Package ကို ဉီးစွာ အသုံးပြုစေမည်ဖြစ်သည်။ NTDP ကုန်ဆုံးသွားမှသာ အခြားဝယ်ယူထားသောအင်တာနက်ပက်ကေ့ချ်များ၊ ရရှိထားသောDataလက်ဆောင်များ နှင့် လက်ကျန်ငွေတို့ကို အသုံးပြုစေမည်ဖြစ်သည်။
အင်တာနက်အသုံးပြုမှုအားလုံးအတွက် ည ၁၁ နာရီမှ မနက် ၇ နာရီအတွင်း အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
CDMA နှင့် Base Tariff အသုံးပြုသူများ ဝယ်ယူသုံးစွဲ၍ မရနိုင်ပါ။
ဆွေသဟာ/ရှယ်ပြော/ရွှေစကားအသုံးပြုသူများသည် Night Time Data Pack ကို ဝယ်ယူပြီးနောက် Base Tariff သို့ ပြောင်းရွှေ့အသုံးပြုလျှင် ကျန်ရှိနေသောဒေတာများကို အသုံးပြုနိုင်မည်မဟုတ်ပါ။ ဒေတာအသုံးပြုနိုင်သောကာလအတွင်းတွင် ဆွေသဟာ/ရှယ်ပြော/ရွှေစကားအစီအစဉ်အား ပြန်လည်ရယူပါက ဒေတာလက်ကျန်များကို သက်တမ်းကုန်သည်အထိ အသုံးပြုနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။
Postpaid မှ Prepaid စနစ်သို့ပြောင်းရွှေ့အသုံးပြုလျှင် ဝယ်ယူပြီးသည့် Night Time Data Pack များကို အသုံးပြုနိုင်မည်မဟုတ်ပါ။
အကြိမ်အရေအတွက် အကန့်အသတ်မရှိ ဝယ်ယူနိုင်ပါသည်။ ဒေတာသက်တမ်းများကို ပေါင်းစည်းအသုံးပြုနိုင်မည်မဟုတ်ပါ။
ပရိုမိုးရှင်းကာလ မှာ ၂၀၂၂ ဇန်နဝါရီလ (၂၂) ရက် မှ ထပ်မံမကြေညာမီအထိ
Author MPT TelecommunicationPosted on နိုဝင်ဘာ 9, 2016 ဇန်နဝါရီ 21, 2022 Categories Data ဝန်ဆောင်မှု ပရိုမိုရှင်းများ
Data ဝန်ဆောင်မှု ပရိုမိုရှင်းများ » Causal pack promo>>>“ဤဝန်ဆောင်မှုအား ရယူအသုံးပြုခြင်းဖြင့် လူကြီးမင်းသည် အောက်ဖော်ပြပါ link တွင် ဖော်ပြပါရှိသော နောက်ဆုံးပြင်ဆင်ထားသည့် MPT ၏ အထွေထွေစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများကိုသဘောတူညီပြီးဖြစ်သည်။”
Casual Pack Promo ဆိုတာဘာလဲ?
Casual Pack Promo ကို အင်တာနက်အသုံးပြုမှုအားလုံးအတွက် အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
Casual Pack Promo ကို အခုပဲဝယ်လိုက်ပါ
၉၄၉ ကျပ် 400MB ၇ ရက် *3002#
၂၆၉၉ ကျပ် 1200MB ၃၀ ရက် *3003#
*ဖော်ပြပါစျေးနှုန်းများတွင် ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန် ၁၅% ပါ၀င်ပြီးဖြစ်သည်။
အထူးအစီအစဉ်ကို အကျုံးဝင်သူများ – ရွှေစကား၊ ဆွေသဟာ နှင့် ရှယ်ပြောအစီအစဉ်ရယူထားသော GSM နှင့် WCDMA အသုံးပြုသူများသာ (Prepaid နှင့် Postpaid နှစ်မျိုးစလုံးပါ၀င်သည်။)
လက်ကျန်ငွေစစ်ဆေးရန် – BAL ဟု ရိုက်နှိပ်ပြီး 1331 သို့ SMS ပေးပို့ရန်။
ဒေတာ လက်ကျန်များနှင့် သက်တမ်းများ ပေါင်းစည်းသွားမည် မဟုတ်ပါ။
Package များကို အကြိမ်အကန့်အသတ်မရှိ ဝယ်ယူနိုင်ပါသည်။
Author MPT TelecommunicationPosted on နိုဝင်ဘာ 9, 2016 ဇန်နဝါရီ 24, 2022 Categories Data ဝန်ဆောင်မှု ပရိုမိုရှင်းများ